တရုတ် Z-ဝင်ရိုးတန်းသုညဆိုသည်အကြောင်း, Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း, သံလိုက် Z-ဝင်ရိုးသုညဆိုသည်အကြောင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > Z-ဝင်ရိုးတန်းသုညဆိုသည်အကြောင်း
Z-ဝင်ရိုးတန်းသုညဆိုသည်အကြောင်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Z-ဝင်ရိုးတန်းသုညဆိုသည်အကြောင်း, Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, သံလိုက် Z-ဝင်ရိုးသုညဆိုသည်အကြောင်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
သံလိုက်နှင့်အတူ ZDI-50A စကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း
မြင့်မားသောတိကျ Z-ဝင်ရိုးတန်း Electro-optical နှင့်အတူစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း
သံလိုက်နှင့်အတူ Z-ဝင်ရိုးတန်း ZDI-50A စကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း
သံလိုက်နှင့်အတူမြင့်မားသော Precision Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း
Electro-optical ZOP-50 နှင့်အတူ Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း
Electro-optical နှင့်အတူ Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း
သံလိုက်နှင့်အတူ ZDI-50A စကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း 1. tool ကိုအရှည်များအတွက်ကွန်ပျူတာကြိတ်စက် / ခုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ 2. အမြင့်: 50.00 + 0.01mm သုံးစွဲဖို့ 3. အကြီးစားတိုင်း surface.Easy သေးငယ်တဲ့ရှုးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ fractue ရှောင်ရှား 4. အနိမျ့အင်အားသုံးနွေဦး။...
Electro-optical ZOP-50 နှင့်အတူ Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း အင်္ဂါရပ်များ: 1.Height: 50mm သံလိုက်အခြေစိုက်စခန်း 2.With ။ ထိမိသည့်အခါ 3.The အနီရောင်ဆီမီးခွက်တက်သက်ရောက်စေလိမ့်မည်။ 4.Accuracy: 0.005mm ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက် 5.Combined ။ 6.Weight: 0.5Kg အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT...
သံလိုက်နှင့်အတူမြင့်မားသော Precision Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း 1. tool ကိုအရှည်များအတွက်ကွန်ပျူတာကြိတ်စက် / ခုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ 2. အမြင့်: 50.00 + 0.01mm သုံးစွဲဖို့ 3. အကြီးစားတိုင်း surface.Easy သေးငယ်တဲ့ရှုးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ fractue ရှောင်ရှား 4....
Z-ဝင်ရိုးတန်းသံလိုက်နှင့်အတူစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း 1. tool ကိုအရှည်များအတွက်ကွန်ပျူတာကြိတ်စက် / ခုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ 2. အမြင့်: 50.00 + 0.01mm သုံးစွဲဖို့ 3. အကြီးစားတိုင်း surface.Easy သေးငယ်တဲ့ရှုးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ fractue...
Electro-optical နှင့်အတူ Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း 1. tool ကို lengh များအတွက်ကွန်ပျူတာကြိတ်စက် / ခုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ 2. အမြင့်: 50.00 + 0.01mm သုံးစွဲဖို့ 3. အကြီးစားတိုင်း surface.Easy သေးငယ်တဲ့ရှုးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ fractue...
သံလိုက်နှင့်အတူ Z-ဝင်ရိုးတန်းစကေးသုညဆိုသည်အကြောင်း 1. tool ကို lengh များအတွက်ကွန်ပျူတာကြိတ်စက် / ခုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ 2. အမြင့်: 50.00 + 0.01mm သုံးစွဲဖို့ 3. အကြီးစားတိုင်း surface.Easy...
တရုတ်နိုင်ငံ Z-ဝင်ရိုးတန်းသုညဆိုသည်အကြောင်း ပေးသွင်း
item: NC-tools များ Z-ဝင်ရိုးကြိုတင် gauge, Z ကိုဝင်ရိုးအမြင့်ဆိုသည်အကြောင်း, Z-ဝင်ရိုးတန်းသုညဆိုသည်အကြောင်း, Z ကိုဝင်ရိုးတင်ဆက်သူကိုသုည
scope: တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် reproducible အရည်အချင်းတူးဖော်ခြင်း, ကြိတ်, ငြီးငွေ့စရာများနှင့်ကြိတ်, ဒါကြောင့်တိကျစွာ positioning ကိုအလုပ်၏အုပ်ချုပ်မှုကို: ဒီထုတ်ကုန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူဗိုင်းလိပ်တံနှင့် wor အပိုင်းအစ datum အတိအကျစင်တာအနေအထား၏စက်ပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်နိုင်မယ့်တိကျတိုင်းတာခြင်းကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
အဆိုပါ Z ကိုဝင်ရိုး tool ကို setting ကို gauge ဟာတိကျမှန်ကန်တဲ့ tool ကိုအမြင့်အလုပ်အပိုင်းအစသို့မဟုတ်စက်စားပွဲပေါ်မှာကနေသတ်မှတ်ထားခံရဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ gauge ဒီ tool များအတွက်ထိပ်မျက်နှာပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အဆက်အသွယ်ဧရိယာရှိပါတယ်။ ဒီ tool အမြင့်ထို့နောက် 50mm တစ်တိကျစွာ tool ကိုအမြင့်ပေးခြင်း, သုညဖို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေါ်တွင်စာဖတ်ရောက်စေဖို့ချိန်ညှိနေသည်။